किन सार्वजनिक भएन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति ? – ZoomNP
किन सार्वजनिक भएन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति ? प्रकाशित मिति: आइतवार, कार्तिक २१, २०७३ समय - ८:३६:२४ कात्तीक २१ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन तोडदै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेको हो ।
दाहालले साउन ३० मा तेस्रोपल्ट मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी आफ्नै पार्टीबाट ५ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेका हुन् । चौथोपल्ट भने भदौ ९ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको थियो । त्यतिबेला भने कांग्रेसबाट मात्र १३ जना मन्त्री थपिएका थिए ।यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।